Qaab Casri ah Oo naag Walba Ku soo xiro galin kartid -Sir Cusub - iftineducation.com
Qaab Casri ah Oo naag Walba Ku soo xiro galin kartid -Sir Cusub
aadan21 / June 2, 2016
iftineducation.com – Waxaa jira shaqsiyaad aan Hasaawe dhex marin hadane nasiib u yeesha inay lamaane ku noqdaan Safarka Dheer ee Noloasha, iyo sidoo kale Lamaane jaceyl uu ka dhexeeyay oo mudo is soo shukaansanayay kuwaa oo ugu danbeyn Calafku kala kaxeeyay.
Hadalku waxa uu leeyahay maqaam iyo micno gooni ah oo munaasabad ama ujeed ku yimaada, sidaa darteed haka weecan ujeedka aad leedahay iskuna day inaad miisaanto hadaladaada, ereyada aad adeegsaneysana yaysan noqon kuwo hagardaacin kara Damacaaga. Ogow hadalba hadalka uu ka macaanyahay wuxuu kuu dhaweynayaa bartilmaameedkaagi.
Intaa Kadib waxaa kuu fududaaneysa in ujeedkaaga aad abaarto oo aad la hadasho gabadha indhahaagu calmadeen. Hadaba Maxaa Xiga?
Wallow qofkastaa uu Eebe u dhaliyay qaab uu u hadlo ama u adeegsado Ereyada oo uu dadka kale kaga duwanyahay ama aan iraahdo hal abuur u gooni ah ayna kala heli ogyihiin Hadalada hadane Aragtideyda iyo kuwa dadka qaar waxaa inta badan loo adeegsadaa Sida soo Socta:-Waxaa jira shaqsiyaad aan Hasaawe dhex marin hadane nasiib u yeesha inay lamaane ku noqdaan Safarka Dheer ee Noloasha, iyo sidoo kale Lamaane jaceyl uu ka dhexeeyay oo mudo is soo shukaansanayay kuwaa oo ugu danbeyn Calafku kala kaxeeyay.
Dhawaqa xiliga galmada ka baxa gabdhaha somalida ma runbaa mise been